Omenala imewe karama
Akpụkpọ anụ whiskey
Obere akwụkwọ ikike
Igwe iko iko
Igwe mmanya mmanya
Ugogbe anya wiski
Ugogbe anya mmanya
Igwe bọọlụ dị elu
Kedu ka esi amata ọdịiche iko ndu na iko enweghị ndu?
Iji enyo nwere ndu eme ogologo oge ga-eme ka mmụkọ nke ndu n'ime ọbara dịkwuo elu. Mgbe o ruru ogo ụfọdụ, ọ ga-eme ka ncheta na ọgụgụ isi mmadụ dalata, mgbakasị uche, nrọ abalị, ehighi ura na nsogbu ndị ọzọ. Nsi na-egbu egbu na-emerụ ụmụaka ahụ na...
Kedu ụdị iko champagne dị?
Kemgbe oge ochie, o yiri ka mmanya na iko nwere njikọ chiri anya, ma ndị enyi na-akpachapụ anya aghaghị ịchọpụta na iko e ji aṅụ mmanya na-egbuke egbuke dị nnọọ iche. Kedu ihe bụ iko champagne na gịnị bụ ojiji ha dị iche iche? 1.Saucer champagne iko N'ezie, ruo mgbe 1970 ...
The 10 nkịtị mmanya iko
Cocktail bụ ụwa mara mma. Ọ juputara na okike ma bụrụ ọkacha mmasị nke ọtụtụ mmadụ. Enwere ọtụtụ ụdị mmanya mmanya n'ụwa, iko ndị a na-eji ejide mmanya nwekwara àgwà nke ha. Ịbanye n'ime ụlọ mmanya, ị nwere ike ịhụ ụdị iko mmanya dị iche iche na mpaghara ...
Usoro mmepụta karama maapụ
1.Design-design draws 2.Making molds-iji alloy steel na chrome-plated molds, dị ka eserese a kwadoro na-eme ka ọkpụkpụ 3.Prepare ihe na-emepụta karama ahụ nke nnukwu iko borosilicate, A na-ahọrọ nha kwesịrị ekwesị nke nnukwu iko borosilicate dị elu. tube na agba a ga-akwadebe. 4.fabri...
Ụdị iko mmanya
"Ezigbo mmanya na ezigbo iko" ị chọrọ ịmata ọdịiche dị n'etiti ụdị dị iche iche nke iko mmanya na ụlọ ahịa? Mmadụ nwere ike ịsị "Achọghị m ịma, achọrọ m ka iko ahụ ṅụọ mmiri" Ọ dị mma! Mana ka chọrọ ịgwa onye ọ bụla na ọ ka dị ezigbo mkpa ịhọrọ ...
Usoro eserese ọla edo nke iko
Ị nwere ike ịhụ na ọtụtụ iko nwere rimmed ọla edo ma ọ bụ ụkpụrụ na ha, na ọtụtụ ndị mmadụ na-echekwa otú e si eme rim ọla edo dị gịrịgịrị na iko ahụ. Ya mere, na-esote, m ga-enye gị nkọwa dị nkenke banyere otú e si ese ọla edo na iko. N'ezie, enwere ụdị eserese ọla edo abụọ: akwụkwọ ntuziaka na mec...
Ihe dị ka karama iko kristal ultra-acha ọcha K9
Kemgbe a mụrụ ngwaahịa iko, ụwa na-achụso anwansi doro anya ma na-egbuke egbuke, na-agbaso ọganihu na sayensị na nkà na ụzụ na njedebe nke nhazi ihe onwunwe, na-agbalịsi ike ịnye ahụmahụ kachasị mma na ọtụtụ foto na-enweghị ezi uche. .
Usoro nke ịkpọsa
Usoro nke ịkpọsa 1.Unboxing 1) Họrọ ngwaahịa ndị na-adịghị mma ma laghachi na ngalaba mmepụta, a na-etinye ngwaahịa ndị ruru eru na pallet ma zigara ya na ngalaba decal. 2) Ọ bụrụ na enwere ihe mmado na iko ahụ, wepụ ya ma hichaa gluu nke ihe mmado ahụ. 3) Ngwaahịa na-erughị eru bụ ...
Kedu ihe bụ usoro mmepụta nke glassware?
1. Iko a na-emepụta site na ịfụ, na ịfụ iko nwere ike kewaa ụzọ abụọ: ịfụ igwe na ịfụ aka. Ihe a na-akpọ ịkpụzi ịkpụzi bụ iji ikuku abịakọrọ ma ọ bụ aka na-afụ ọnụ iji mee ka mmiri mmiri etolite ụdị ngwaahịa n'ụdị ahụ. Ịfụ aka nwere ike...
Ọnụ ịfụ iko mmepụta usoro
Igwe eji eme igwe na-eme ka ọ dị mfe ịmepụta, na-azọpụta oge na ịrụ ọrụ nke ọma, n'ihi ya, ha na-aghọwanye ndị a na-ahụkarị.Ma maka ụfọdụ ụdị pụrụ iche na nke siri ike ịtọhapụ, ụfọdụ iko glaze na-acha acha, ọnụ na-agbapụ bụ ihe na-adịghị agbanwe agbanwe. Ka anyị mụtakwuo maka mmepụta...
Kedu ụdị ihe dị maka iko
1. Soda lime iko kwa ụbọchị, ọkwá, wdg bụ ihe a na-eji ihe a eme ihe, nke a na-eji obere okpomọkụ dị iche iche mara. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na a wụsa mmiri na-esi esi n’otu ugegbe e si na friji pụta, o yikarịrị ka ọ̀ ga-agbawa. Na mgbakwunye, ọ bụghị recomm ...
Ugegbe whiskey Classic, ole ka ị maara?
1.Final mmetụ na nkume Site a Canadian ika, ugwu mgbawa nkume na ala nke mgbawa ugwu whiskey iko. Bọọlụ ice na-ajụ oyi yana ebu gụnyere. Mgbe ị na-aṅụ mmanya whiskey, gbakwunye bọọlụ ice, gbagharịa iko ahụ nke ọma, bọọlụ ice na-agharị nke ọma, jụụ t..
The agba iko kalama